Forex ကျောင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
နိုဝင်ဘာလ 15, 2019
ငွေကြေး Pair ကိုဆက်စပ်မှုအချို့ငွေကြေးအခြားသူများကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ရွှေ့နေစဉ်တူညီတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်ရွှေ့ဖို့လေ့ကြောင်းသိရန်အသုံးဝင်သည်။ တစ်ဦးထက်ပိုငွေကြေးရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်သောသူတို့အဘို့ [ ... ]
အကောင်းဆုံးနာရီ, နေ့ရက်များ, ဒါဟာကုန်သွယ်ရေးလ Forex, နာရီဝန်းကျင် 24 နာရီ, 5.5 ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်, 12 လအတွင်းတစ်နှစ်ကုန်သွယ်နိုင်မယ့်စျေးကွက်ကြောင်းကြီးလှ၏။ တနေ့လုံးပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်း [ ... ]
Market ကနာရီအဆိုပါ Forex စျေးကွက် (: သောကြာနေ့ 24 မှ 5.5 ညနေ EST: တနင်္ဂနွေ5ထံမှ 00 ညနေ EST) နာရီစျေးကွက်န်းကျင်တစ်ခု,5နာရီ, 00 ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်ဖြစ်ပါသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင် .Somewhere, ဘဏ္ဍာရေးစင်တာများဖွင့်များမှာ [ ... ]
ဇယားအမျိုးအစားများဇယားကွက် time.The က x ဝင်ရိုးကိုကျော်တစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံ၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုညာဘက်လက်ဝဲတိုးမြှင့်အချိန်နှစ်တိုးရှိပါတယ်။ အဆိုပါက y ဝင်ရိုး top.Charts မှအောက်ခြေတိုးမြှင့်စျေးနှုန်းတိုးမြင့်မှုမှအသုံးပြုကြသည်ရှိပါတယ် [ ... ]
ကုန်သွယ်ရေးအမိန့်အမျိုးအစားများဤ MT4 ပလက်ဖောင်းနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့ရရှိအသုံးအများဆုံးအလို့ငှာအမျိုးအစားများကိုတခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အကျဉ်းအောက်ပါအမိန့်အမျိုးအစားများအတွက်ဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်: Market ကအမိန့် [ ... ]
သြဇာ, အများကြီးနဲ့ Margin သြဇာဆိုတာဘာလဲ သြဇာတစ်ဦးရဲ့ margin ကုန်သွယ်အချိုးအစားကိုကိုယ်စားပြုနှင့် Forex ၌ဤ 400 အဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံအဖြစ်တာ, အလွန်မြင့်မားဖြစ်နိုင်သည်ရုံ၏တစ်ဦးရဲ့ margin သိုက်ဆိုလိုတာက 1, [ ... ]
နေ့ချင်းညချင်းအကျိုးစီးပွား, ကြည့်ရန်အတွက်ရွှေ့, သို့မဟုတ်သင်သည်တခုတခုအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုတာဝန်ခံသင့်အကောင့်ဘဏ်စာရင်းထဲသွင်း, ဒါမှမဟုတ် debited ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေပွင့်လင်းအနေအထားကိုင်ထားလျှင်အကြောင်းကို5ညနေ EST (အချိန်အချို့သောပွဲစားနှင့်အတူကွဲပြား) မှာနှုန်းဖလှယ်ရန် [ ... ]
ငွေသွင်းငွေထုတ်ကုန်ကျစရိတ်များ (ပြံ့နှံ့နှင့်ကော်မရှင်များ) Forex အဘို့အမွှမ်းတင်အားသာချက်များတစ်ခုမှာနှင့်မကြာခဏပွဲစားများသူတို့ကိုယ်သူတို့အသုံးပြုပုံမျှကော်မရှင်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်, လှညျ့စားစဉ်းစားတွေးခေါ်သို့အများဆုံးလေ့လာသူကုန်သည်များဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်ကြေညာချက် [ ... ]
တစ်ဦးက Pip ကဘာလဲ Pips နှင့် Profits တွေလား? သငျသညျအလေးသို့များမှာအခါ, စွမ်းဆောင်ရည်၏ဘုံပြောပြလိုပါသည်ပေါင်ဖြစ်ပါသည်: "ငါသည်ခုံတန်းလျားယနေ့ 150 ပေါင်ကိုဖိလေ၏။ " သင် Forex သို့များမှာအခါ, စွမ်းဆောင်ရည်၏ဘုံပြောပြလိုပါသည် [ ... ]
ငွေကြေးစနစ်စွမ်း Forex အမြဲအားလုံးအတွက်အတွက်ကုန်သွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးငွေကြေးကိုလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုကြည့်ပါတိုင်းကထိုကဲ့သို့သော EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ်ငွေကြေးတစ်စုံဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ယူရိုနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ: EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်ခုငွေကြေးဖော်ပြသည်။ ဒီမှာ [ ... ]
Forex Trading ၏ Start မှသင်မည်သို့အသစ်တခုလုပ်ငန်းစတင်ပါတော့မည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာသင့်စီးပွားရေးအသစ်များအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများအရပျ၌တည်ရှိ၏။ ထိုသို့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့်ငွေကြေးကုန်သည်တွေတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် [ ... ]
Options ကို Options ကို၏ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် Trader ၏ထင်ဟပ်သည့်ဝယ်ယူထားတဲ့အဘို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းမှာတိကျတဲ့ကုန်စည်သို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာရောင်းပိုင်ခွင့်ပေးကြောင်းဘဏ္ဍာရေးတူရိယာများမှာ [ ... ]
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အချို့သောကုန်သွယ်မြို့တော်နှင့်အတူ Commodities ၏ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် Trader ၏ရောင်ပြန်ဟပ်, ကုန်စည်အနာဂတ်သို့မဟုတ် options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်အချို့ငွေရှာဖို့ကြိုးစားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းနီးပါး [ ... ]
စျေးကွက်တစ်ခု Trader စတော့ရှယ်ယာများ၏ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အကြှနျုပျ၏ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏ရောင်ပြန်ဟပ်ခန့် 10, Dayton, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၌ငါ့အဘ၏ပညတ်တိကရုံးလာရောက်လည်ပတ်နေတဲ့ 1940 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်ရောက်လာတယ်။ မှာနေ့လယ်စာပြီးနောက် [ ... ]
ကုန်သွယ်စာချုပ် Execution မြန်နှုန်း၏တစ်လအပေါ်မှီခိုစတော့ရှယ်ယာရဲ့နေ့စဉ်အသံအတိုးအကျယ် Liquid အပေါ်မှီခိုကမ္ဘာကြီးကိုအရည်အတွက်စတော့ရှယ်ယာများနှင့်အနာဂတ် Forex စတော့ရှယ်ယာများ Futures အရွယ်အစား & Liquid အကြီးဆုံးမြို့အများစုအရည်စျေးကွက်ကျော် FX ကောင်းကျိုးများ [ ... ]
အဘယ်သူသည် Forex ကုန်သွယ်မှု? ငွေဖြစ်လွယ် & ပါဝင်တစ်နေ့လျှင် $4ထရီလီယံထက်ကျော်လွန်တဲ့ကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူ Forex ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ကြီးထွားမှု, Forex ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးအရည်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, [ ... ]
Forex (FX) ထရေးဒင်းဆိုတာဘာလဲ ငါတို့ရှိသမျှသည် Forex ၏မျှသာဖော်ပြထားခြင်းရူပတျရှုပျထှေးရရှိဘယ်မှာညစာပါတီခဲ့ကြပြီ။ လူအများစုဟာမသည်အဘယ်အရာ Forex သို့မဟုတ်ပါကမည်သို့အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မသိရပါဘူး [ ... ]